Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxaya dalka Itoobiya - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa inuu maanta u ambabaxo dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa halkaasi kaga qayb geli doona Shir Saddex geesood ah oo ay halkaasi kula yeelanayo Ra’aysul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Eretrea Isaias Afwerki.
Agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Abdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in uu madaxweynaha halkaasi kaga qeyb geli doono shir sadex geesood ah oo uu la yeelan doono madaxda Itoobiya iyo Eritrea.
Dhanka kale war qoraal ah oo laga soo saaray xafiiska Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in uu Ra’iisul Wasaare Abiy uu madaxda dalalka Soomaaliya iyo Eritrea ku casumay Itoobiya.
“Si loo sii dardar geliyo isbedeladii uu Ra’iisul Wasaaruhu horkacayay ee saameynta ku yeeshay nabadda iyo xasiloonida gobolka oo iminka la qorsheynayo isdhex gal dhinaca dhaqaalaha ah, waxa uu ra’isul wasaaruhu casuumay Madaxda Eritrea iyo Soomaaliya si ay u booqdaan gobolka Amxaarada” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo lagu daabacay bogga Twitter ee xafiiska ra’iisul wasaare Abiy Axmed.
Kulankan ayaa lagu sheegay inuu isku xiri doono natiijooyinkii kasoo baxay heshiiskii lagu gaaray Shirkii is-dhex galka dhaqaalaha ee ay madaxda sadexda dal ku yeesheen Magaalada Asmara ee dalka Eretrea horaantii bishii Sebteember.
“Booqashadan ayaa daba socota kulankii sadex geesoodka ahaa ee madaxda sadexda dal ay ku yeesheen Asmara kaas oo looga tashanayay isdhex galka dhaqaalaha dalalka gobolka, sidoo kale booqashada madaxda ayaa waxaa ka mid noqon doonta in ay booqdaan mashaariic kala duwan oo horumarineed kuwaa oo ka socda Gondar iyo Bahir Dahar” ayaa la sii raaciyay warkan ka soo baxay xafiiska ra’isul wasaaraha Itoobiya.
AMISOM oo baareysa dilal loo geystay dad rayid ah oo ka dhacay Muqdisho
Itoobiya: "Ma jirto sabab aan bad la'aan u ahaanno inagoo 100 milyan ah"